Imbali yeTaurus - Itaurus
Ulwazi ngeMbali yeTaurus kunye neNtsomi x
Ngenxa ye-precession ye-Equinox, uphawu lwezodiacal lwe Taurus ayingqamani nekroza leTaurus. Kukuqhubeka komqondiso we-Aries kwaye imele i-degrees yesibini ye-30 yesangqa se-zodiacal. Isibonakaliso se-Aries simele ukuqala kwentwasahlobo kunye nayo isiqalo sobomi, ngelixa i-Taurus isibonakaliso esisisigxina esiqhubeka oko i-Aries iqalile. Ubomi buqhakaze ngokupheleleyo kuphawu lweTaurus.
Iinkwenkwezi eTaurus zibamba amaqela amabini avulekileyo, iPleiades kunye neHyades kwaye ubukhulu becala bubekwe ekupheleni kophawu lweTaurus kunye nokuqala kophawu lwezodiacal lweGemini. NgeXesha Lokuqala leBronzi yaphawula indawo yeLanga ngexesha leequinox yasentwasahlobo, kanye njengokuba ikroza leAries lalimele i-equinox kwiminyaka engama-2000 eyadlulayo. I-constellation ye-Taurus idibaniswe nayo i-5000 ukuya kwi-1700 BC, ngaphambi kokuba i-equinox yangaphambili ishukumise imbono yethu kumqondiso we-Aries.
ITaurus lelinye lawona makroza amadala aziwayo. Kucingelwa ukuba yaboniswa kwimizobo yomqolomba, eyaqala malunga ne-15000 BC kodwa kude kube kwi-astronomy yaseBhabhiloni yayimelwe njengenkunzi yenkomo, ebizwa ngokuba yinkunzi yezulu okanye inkunzi yenkomo ngaphambili. Ukubaluleka kwayo kwikhalenda yezolimo kuphembelele amanani eenkomo ahlukeneyo kwiintsomi zaseSumer yakudala, iAkkad, iAsiriya, iBhabheli, iJiphutha, kunye neGrisi neRoma.
Kwi-Epic kaGilgamesh, enye yeencwadi zokuqala zoncwadi, iTaurus ithunyelwa nguthixokazi uIshtar ukuba abulale uGilgamesh ngenxa yokugatya kwakhe inkqubela, ngoxa kwimizobo yamandulo yaseMesopotamiya yayinxulunyaniswa ngokusondeleyo noInnana, uthixokazi wamaSumeri wothando lwesini, ukuchuma nokuchuma. imfazwe. Nangona iinkcubeko ezininzi zinebali eliqhagamshelwe kumqondiso weTaurus, ezona ntsomi zicacileyo zezo zisuka eGrisi yamandulo. Zimbini kuzo, zombini ezinxibelelene ngokusondeleyo nokumkani woothixo, uZeyus (umntu ongumRoma olingana naye nguJupiter).
Intsomi yokuqala inxulumanisa uTaurus noZeyus ukuthimba uYuropa, inkosazana yaseFenike. Ngoxa wayesonwaba nabahlobo bakhe ngaselunxwemeni lolwandle, uZeyus wamthanda waza waya kuye ezenze ngathi yinkunzi yenkomo. U-Europa watsalwa bubuhle nokuthantamisa kwenkunzi yenkomo eguqe phambi kwakhe, watsibela emqolo ukuze imkhwelise. Imbethe emqolo, yaqubha yaza yamthabatha emanzini yamsa eKrete, apho yazala oonyana bayo abathathu. Emva koko, watshata nokumkani waseKrete uAsterion apho aba bantwana bafumana ilifa lolawulo lwesiqithi.
Inkolelo yesibini inxulumene nokungathembeki kokuqala kukaZeyus kuHera, kunye nombingelelikazi kaHera u-Io. Wathi uHera akuqonda ukuba uyaqhathwa, waba nomsindo ngokwenene. UZeus waguqula u-Io waba yithokazi ukuze amkhusele kumsindo kaHera. Ngombulelo ku-Argus, i-monster ebona yonke into, uHera wafumanisa ngale nto waza waqalekisa u-Io ukuba azibuze umhlaba owenziwe, njengenkomo, ehlatywa yi-gadfly ngokuqhubekayo, ngoko uya kunyanzeleka ukuba azibuze ngonaphakade. Emva kwexesha elithile, ekugqibeleni u-Io wawela ulwandle lwase-Ionian waya eYiputa, apho wabuyiselwa kwisimo somntu nguZeus waza wazala abantwana bakhe ababini, unyana oza kuba ngukumkani waseYiputa kunye nentombi.
Unxibelelwano phakathi kwentsomi yeTaurus kunye neTaurus zodiac sign
I-Taurus ixelela umsila wendoda enempembelelo ezenza into engeyiyo, ukuze iphumelele uthando lomntu othandekayo. Libali lokuxhwilwa, ukuhamba ngaphesheya kolwandle kunye nomboniso wecala elithambileyo kodwa elomeleleyo kwindoda engeyonyani. Inkolelo yesibini ikhohlakele ngakumbi kwaye idla ngokubonakaliswa xa iiplanethi ezikulo mqondiso, okanye zidibene nale nkwenkwezi, zinesidima esinzima kunye nemiba.
Kuthetha ukukrexeza, ulwalamano lothando lwendoda etshatileyo nomhlobo osondeleyo womfazi wayo, okanye kwanodade wabo. Kukhokelela kumsindo womfazi, oya kwenza nantoni na ukwenzakalisa isithandwa somyeni wakhe esingayi kuba nalo naluphi na uxolo de siwele umgama omde, sifudukele kwelinye ilizwe okanye siwele ulwandle. Kusoloko kukho ithuba lokukhulelwa nokuzalwa konyana ngaphandle komtshato, oza kuba nempembelelo kamva, kunye nokutshata komfazi nendoda engenguye uyise wabantwana bakhe.
Isagittarius I-Scorpio Iiary Ngena Khetha Uphawu